Etu esi eji ulo | Ota Bunkanomori
Daejeon Culture ọhịa NchNhr
Ime ụlọ ọtụtụ
Ngosipụta ngosipụta / square
Studiolọ egwu Music 1.2.3
Egwuregwu egwuregwu 1.2
Studiolọ ihe nkiri 1.2.3
Ime ụlọ ndị Japan
Inglọ nzuko / ebe ichere
Ihe mgbochi-enweghị ihe mgbochi
Banyere ozi na-enweghị ihe mgbochi
Usoro ntinye na ojiji>
Ngwa maka lọtrị ihe owuwu
Agbanwela usoro lọtrị (*) iji gbochie ọrịa nje coronavirus ọhụrụ.
Pịa ebe a maka nkọwa gbasara usoro lọtrị
Ulo egwuregwu nke abuo
Studlọ nka egwu niile
Ime ụlọ nri / ime ụlọ nka / ime ụlọ ndị Japan
Meetinglọ nzukọ niile / ụlọ ndị echere
Zọ lọtrị Anyị ga-adọta nza na ọtụtụ ụlọ nke Ota Bunkanomori.
* Inweghị ike itinye akwụkwọ na Neti Uguisu. Ọgbụ Warbler
Oge ntinye / usoro A nabatara ụlọ na ọtụtụ ụlọ na 9th floor nke Ota Bunkanomori site na 20: 10 ruo 00: XNUMX n'ụbọchị nke lọtrị. Bido n’abalị iri na ise rue na ngwụcha ọnwa, ọnwa anọ tupu ọnwa eji, tinye na Netisu Uguisu ma ọ bụ na windo ụlọ ọrụ ọ bụla dị na Ota Ward.
Bọchị ịgba lọtrị 6st ọnwa isii tupu ọnwa eji (1th na Jenụwarị naanị) 3st ọnwa isii tupu ọnwa eji (1th na Jenụwarị naanị) 4st ọnwa isii tupu ọnwa eji (1th na Jenụwarị naanị) Daybọchị 3 ọnwa atọ tupu ọnwa eji
Oge nkwenye na-emeri Ọ dịghị Site na ụbọchị mgbe ụbọchị lọtrị ruo ụbọchị 7 nke otu ọnwa (ịkagbu ga-eme na akpaghị aka mgbe oge ahụ)
Ngwa maka ojiji
Deadline Oge ịkwụ ụgwọ Site na ubochi larịị ruo ụbọchị iri na ise nke otu ọnwa ahụ
(Kagbuo mgbe oge ahụ gasịrị) Site na ụbọchị mgbe ụbọchị lọtrị ruo 15 nke otu ọnwa ahụ
Ebe nnabata ngwa
· Oge nnabata Daejeon Ohia Ohia
9: 00 rue 19: 00 (tinyere Saturday na Sọnde) Daejeon Ohia Ohia
9: 00 rue 19: 00 (tinyere Saturday na Sọnde)
Meetinglọ nzukọ na-ezighi ezi na ogige ntụrụndụ na ngalaba
Ngwa maka ụlọ ọrụ ohere
Oge ojiji ojiji Site na ụbọchị mgbe ụbọchị lọtrị ruo ụbọchị 7 tupu ụbọchị eji Site n'ụbọchị nke ụbọchị lọtrị ruo ụbọchị eji Site na ụbọchị mgbe ụbọchị lọtrị ruo ụbọchị 7 tupu ụbọchị eji Site na 3th nke ọnwa 8 ọnwa tupu ọnwa eji ruo ụbọchị eji (ụbọchị 3 tupu ụbọchị eji ma ọ bụrụ na itinye ntanetị)
Deadline Oge ịkwụ ụgwọ Biko kwụọ ụgwọ n'oge ngwà.　 Ọ bụrụ na ị tinye ntanetị, ọ ga-abụ n'ime ụbọchị 14 site na ụbọchị nke ngwa ahụ.
(Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-erughị ụbọchị 17 tupu ụbọchị eji, ruo ụbọchị 3 tupu ụbọchị eji ya)
Ulo Ogwuruegwu 2 Sports (Squash Court)
A ga-anabata nnabata na mbata nke izizi na Ota Bunkanomori site na elekere iri nke ụtụtụ atọ ụbọchị atọ tupu ụbọchị eji. (Ekwentị ndoputa omume)
Mgbe i mere ndoputa, biko zụta ma tinye akwụkwọ maka tiketi na igwe na-ere tiketi na ụbọchị eji.
Uguisu Net bụ aha otutu maka sistemụ kọmputa nke na-eji ụlọ ọrụ ọha na eze na Ota Ward.
Site na ịdenye aha tupu oge eruo, ị ga-enwe ike itinye akwụkwọ maka lọtrị maka ụlọ ọrụ ọha na eze site na ekwentị na-aza olu, ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụ Internetntanetị, ma ọ bụ ịme ndokwa maka ụlọ ọrụ ohere.Tụkwasị na nke a, ọbụna ndị na-edebanyeghị aha ha nwere ike ịma na e nwere akụrụngwa site na ụda ekwentị na-aza, Internet, na facsimiles.
Maka ozi banyere etu esi edebanye aha na otu esi eji ya, lee “Uguisu Net Guidebook” ma ọ bụ Uguisu Net Homepage.
Ozi gbasara Ota Ward Public Facility Utilization System (Uguisu Net) (Ota Ward Homepage Homepage)
143-0024-2, Etiti, Ota-ku, Tokyo 10-1
Mmezi / ụbọchị nyocha / nhicha emechiri / nwa oge emechi